Hu Adepa Wɔ Wo Brɛ Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kazakh Kekchi Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mixe Mizo Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vezo Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
‘Onipa biara nhu adepa, ne brɛ nyinaa mu.’—ƆSƐNKAFO 3:13.
1-3. (a) Nnipa bebree te nka sɛn wɔ wɔn adwuma ho? (b) Adwuma ho adwene bɛn na Bible hyɛ ho nkuran, na nsɛmmisa bɛn na yebesusuw ho wɔ ti yi mu?
ƐNNƐ, nnipa pii nni anigye wɔ nnwuma a wɔyɛ mu. Esiane sɛ wɔde nnɔnhwerew pii yɛ adwuma a wɔn ani nnye ho nti, sɛ ade rebɛkye ma wɔakɔ adwuma a, na wɔn yam hyehye wɔn. Ɛbɛyɛ dɛn na wɔn a wɔte nka saa no ani agye wɔn adwuma ho na wɔanya akomatɔyam mpo?
2 Bible ma yenya adwene a ɛfata wɔ adwumaden ho. Ɛka sɛ adwuma ne nea efi mu ba nyinaa yɛ akyɛde. Solomon kyerɛwee sɛ: “Onipa biara bedidi na wanom na wahu adepa, ne brɛ nyinaa mu. Onyankopɔn akyɛde ne no.” (Ɔsɛnkafo 3:13) Yehowa dɔ yɛn na bere nyinaa ɔpɛ sɛ yenya nea eye, enti n’ani gye ho sɛ yebenya akomatɔyam wɔ yɛn adwuma mu na yɛatwa yɛn brɛ so aba. Sɛ yɛbɛtena ne dɔ mu a, ehia sɛ yɛtena ase ma ɛne n’adwene ne ne nnyinasosɛm a ɛfa adwuma ho no hyia.—Kenkan Ɔsɛnkafo 2:24; 5:18.
3 Yebesusuw nsɛmmisa nnan ho wɔ saa ti yi mu: Yɛbɛyɛ dɛn ahu adepa wɔ yɛn brɛ mu? Adwuma bɛn na ɛnsɛ sɛ nokware Kristofo yɛ? Yɛbɛyɛ dɛn ama yɛn adwuma ne yɛn som akari pɛ? Na adwuma a ɛho hia sen biara bɛn na yebetumi ayɛ? Nanso ansa na yebesusuw nsɛmmisa yi ho no, momma yɛnhwɛ nea yebetumi asua afi adwumayɛfo akunini mmienu a wɔsen biara hɔ—Yehowa Nyankopɔn ne Yesu Kristo.
ODWUMAYƐNI PUMPUNI NE ODWUMAYƐNI A NE HO AKOKWAW
4, 5. Ɔkwan bɛn so na Bible no kyerɛ sɛ Yehowa yɛ odwumayɛni pa?
4 Yehowa ne Odwumayɛni Pumpuni no. Genesis 1:1 ka sɛ: “Mfiase no Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase.” Bere a Onyankopɔn bɔɔ asase so nneɛma wiei no, ɔkae sɛ “eye.” (Genesis 1:31) Ɔkwan foforo so no, adwuma a ɔyɛe wɔ asase so no nyinaa maa ne koma tɔɔ ne yam. Akyinnye biara nni ho sɛ Yehowa a ɔyɛ “anigye Nyankopɔn” no nyaa anigye kɛse sɛ odwumayɛni pa.—1 Timoteo 1:11.
5 Yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ nsi no nnyae adwumayɛ da. Bere a ɔbɔɔ asase ne ɛso nneɛma wiei akyi bere tenten bi no, Yesu kae sɛ: “M’Agya ayɛ adwuma abesi sesɛɛ.” (Yohane 5:17) Dɛn na Agya no ayɛ abesi sesɛɛ? Ofi ne soro tenabea hɔ hwɛ adesamma na ɔbɔ wɔn ho ban. Afei wayɛ “abɔde foforo,” honhom mu Kristofo a daakye wɔne Yesu bedi ade wɔ soro. (2 Korintofo 5:17) Ɔreyɛ adwuma ma atirimpɔw a ɔwɔ ma adesamma no aba mu—sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn a wɔdɔ no no benya daa nkwa wɔ wiase foforo bi mu. (Romafo 6:23) Sɛ Yehowa hwɛ nea afi n’adwuma mu aba no a, n’ani gye. Nnipa ɔpepem pii na Onyankopɔn atwe wɔn ma wɔagye Ahenni nkrasɛm no so, na wɔasakra wɔn abrabɔ sɛnea wɔbɛtena ne dɔ mu.—Yohane 6:44.
6, 7. Adanse bɛn na ɛwɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ Yesu de mfe pii yɛɛ adwumaden?
6 Yesu nso ada ne ho adi fi bere tenten sɛ obi a ɔyɛ adwumaden. Ansa na ɔreba asase so sɛ onipa no, Onyankopɔn de no dii dwuma sɛ “odwumayɛni a ne ho akokwaw” wɔ nneɛma a ɔbɔe wɔ “soro ne asase so” nyinaa mu. (Mmebusɛm 8:22-31; Kolosefo 1:15-17) Bere a Yesu wɔ asase so no, ɔkɔɔ so yɛɛ adwumaden. N’asetena mfiase no, osuaa sɛnea wɔde nnua yɛ adwuma, na ɛma wɔfrɛɛ no “duadwumfo.” (Marko 6:3) Ná saa adwuma no gye ahoɔden ne ahokokwaw yiye, efisɛ saa bere no na wonni mfiri a wɔde pae nnua anaa sotɔɔ a wɔtɔn nnua ho nneɛma wom anaa anyinam ahoɔden a ɛbɛma adwuma no ayɛ mmerɛw. So wubetumi atwa Yesu ho mfonini wɔ w’adwenem sɛ wafi adi rekotwa nnua na mpo ɔretwe akɔ faako a ɔyɛ adwuma no? Anaasɛ Yesu a ɔresi dan—ɔrepaapae mpuran a ɔde bɛbɔ dan so, de asisi apon, na mpo wayɛ dan no mu nneɛma ahorow? Akyinnye biara nni ho sɛ na Yesu nim anigye a obi nya bere a ɔde ahokokwaw yɛ adwumaden no.
7 Afei na Yesu yɛ mmɔdenbɔfo a ɔde nsi yɛɛ asɛnka adwuma no. Ɔde mfe mmiɛnsa ne fã yɛɛ adwuma a ɛho hia sen biara yi denneennen. Esiane sɛ na ɔpɛ sɛ ɔka asɛm no kyerɛ nnipa pii nti, ɔde bere a ɔwɔ nyinaa yɛɛ adwuma; ná ɔsɔre anɔpahema yɛ adwuma kodu anadwo. (Luka 21:37, 38; Yohane 3:2) “Otutuu akwan kɔɔ nkurow mu ne nkuraa ase kɔkaa asɛm no, na ɔpaee mu kaa Onyankopɔn ahenni ho asɛmpa.” (Luka 8:1) Yesu nantew mfutukwan so twaa akwansin ɔhaha pii kɔkaa asɛmpa no kyerɛɛ nnipa.
8, 9. Ɔkwan bɛn so na Yesu huu adepa wɔ ne brɛ mu?
8 So Yesu huu adepa bi wɔ ɔsom adwuma a ɔyeree ne ho yɛe no mu? Yiw! Oguu Ahenni ho nokware aba no, na ogyaw asase a na bere adu sɛ wotwa so aba wɔ n’akyi. Onyankopɔn adwuma a Yesu yɛe no maa no ahoɔden; enti ɛtɔ da bi a na ɔmpɛ sɛ odidi mpo na watumi awie adwuma no. (Yohane 4:31-38) Hwɛ anigye a ebetumi aba sɛ Yesu nyae bere a owiee ne som adwuma wɔ asase so na ɔkaa nokwasɛm yi kyerɛɛ n’Agya no: “Mawie adwuma a wode ama me sɛ menyɛ no de ahyɛ wo anuonyam wɔ asase so.”—Yohane 17:4.
9 Ampa ara Yehowa ne Yesu hu adepa wɔ wɔn brɛ mu, na eyi yɛ nhwɛso a ɛso nni ma yɛn. Ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa no ka yɛn ma ‘yesuasua Onyankopɔn.’ (Efesofo 5:1) Saa ara na ɔdɔ a yɛwɔ ma Yesu no nso ka yɛn ma ‘yedi n’anammɔn akyi pɛɛ.’ (1 Petro 2:21) Afei momma yɛnhwɛ ɔkwan a yɛn nso yebetumi afa so ahu adepa wɔ yɛn brɛ mu.
SƐNEA YEBEHU ADEPA WƆ YƐN BRƐ MU
Sɛ wudi Bible nnyinasosɛm akyi a, ɛbɛboa wo ama woahu adepa wɔ wo brɛ mu
10, 11. Dɛn na ebetumi aboa yɛn ma yɛanya adwempa wɔ yɛn adwuma ho?
10 Honam fam adwuma wɔ n’afa wɔ nokware Kristofo asetenam. Yɛpɛ sɛ yenya anigye ne akomatɔyam wɔ yɛn adwuma mu, nanso sɛ yɛn ani nnye adwuma a yɛyɛ ho a, eyi betumi ayɛ asɛnnennen. Yɛbɛyɛ dɛn ahu adepa wɔ yɛn adwuma mu wɔ tebea a ɛte saa mu?
11 Ɛsɛ sɛ yenya adwempa. Yɛrentumi nsakra yɛn tebea nanso yebetumi asesa yɛn adwene. Onyankopɔn adwene a yebesusuw ho no betumi aboa yɛn ma yɛanya adwempa wɔ yɛn adwuma ho. Sɛ nhwɛso no, sɛ woyɛ abusua ti a, ma ɛntena w’adwenem sɛ, sɛ w’ani nnye w’adwuma ho mpo a, ɛno na ɛboa wo ma wutumi hwɛ w’abusua. Kae sɛ Onyankopɔn bu w’adɔfo a wobɛhwɛ wɔn no aniberesɛm. N’Asɛm ka sɛ, sɛ obi ntumi hwɛ n’abusua a, “ɔyɛ onipa bɔne sen nea onnye nni mpo.” (1 Timoteo 5:8) Sɛ woma ɛtena w’adwenem sɛ adwuma a woyɛ no na ɛma wutumi di asɛyɛde a Onyankopɔn de ato wo so no ho dwuma a, ebetumi ama woanya anigye ne akomatɔyam a ebia wɔn a wo ne wɔn yɛ adwuma no nni bi.
12. Akwan bɛn so na nsi a yɛyɛ ne nokware a yedi wɔ yɛn adwumam no de akatua ba?
12 Ɛsɛ sɛ yɛyɛ nsi na yedi nokware. Sɛ yɛyere yɛn ho yɛ adwuma na yɛyɛ no yiye a, ebetumi ama yɛanya nhyira. Adwumawura biara pɛ adwumayɛfo a wɔde nsi ne ahokokwaw yɛ adwuma. (Mmebusɛm 12:24; 22:29) Sɛ́ nokware Kristofo no, yedi nokware wɔ yɛn adwumam—ɛnsɛ sɛ yewia sika anaa adwumam nneɛma biara na ɛnsɛ sɛ yɛfa adwuma bere yɛ biribi foforo. (Efesofo 4:28) Sɛnea yehui wɔ nhoma yi Ti 14 no, nokwaredi de akatua ba. Sɛ obi yɛ nokwaredifo wɔ adwumam a, afoforo tumi de wɔn ho to no so. Na sɛ yɛn adwumawura hu yɛn nokwaredi oo, wanhu oo, yebetumi anya akomatɔyam sɛ yɛwɔ “ahonim pa” na yɛresɔ Onyankopɔn a yɛdɔ no no ani.—Hebrifo 13:18; Kolosefo 3:22-24.
13. Sɛ yɛyɛ nhwɛso pa wɔ adwumam a, dɛn na ebefi mu aba?
13 Ɛsɛ sɛ yehu sɛ yɛn abrabɔ betumi ahyɛ Onyankopɔn anuonyam. Sɛ yekura Kristofo abrabɔ kronn mu wɔ yɛn adwuma mu a, afoforo behu. Dɛn na ebefi mu aba? Ɛbɛma “yɛn Agyenkwa Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ ho aba nyam.” (Tito 2:9, 10) Yiw, yɛn abrabɔ pa bɛma afoforo ahu sɛ yɛn som yɛ fɛ, na ɛbɛtwetwe wɔn aba ho. Hwɛ sɛnea wobɛte nka afa bere a wo yɔnko dwumayeni gye nokware no esiane nhwɛso pa a woyɛ wɔ adwumam nti! Nea ɛho hia titiriw no, susuw eyi ho hwɛ: Akatua bɛn na ɛsen sɛ wubehu sɛ w’abrabɔ pa hyɛ Yehowa anuonyam na ɛma ne koma ani gye?—Kenkan Mmebusɛm 27:11; 1 Petro 2:12.
NHUMU A YƐDE BƐPAW ADWUMA
14-16. Sɛ yɛrepaw adwuma a yɛbɛyɛ a, nsɛmmisa a ɛho hia bɛn na ɛsɛ sɛ yesusuw ho?
14 Bible nkyerɛ adwuma pɔtee a eye ne nea enye. Nanso eyi nkyerɛ sɛ yebetumi ayɛ adwuma biara a sɛnea ɛte no mfa ho. Kyerɛwnsɛm no betumi aboa yɛn ma yɛapaw adwuma a ɛho tew na ɛsɔ Onyankopɔn ani na yɛakwati adwuma a ɛnsɔ n’ani. (Mmebusɛm 2:6) Sɛ yɛpɛ sɛ yɛpaw adwuma a yɛbɛyɛ a, nsɛmmisa mmienu a ɛho hia bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yesusuw ho.
15 So saa adwuma yi bɛma yɛayɛ biribi pɔtee a Bible kasa tia? Onyankopɔn Asɛm hyɛ yɛn pefee sɛ yɛmmmɔ korɔn, yennni atoro, na yɛnnyɛ ahoni biara. (Exodus 20:4; Asomafo Nnwuma 15:29; Efesofo 4:28; Adiyisɛm 21:8) Enti yɛbɛpo adwuma biara a ɛhwehwɛ sɛ yɛyɛ nneɛma a ɛtete saa. Ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa no remma yɛn kwan da sɛ yɛnyɛ adwuma biara a emu nneyɛe bu Onyankopɔn mmara so.—Kenkan 1 Yohane 5:3.
16 So saa adwuma a yɛbɛyɛ no bɛkyerɛ sɛ yɛreboa anaa yɛrehyɛ adebɔne bi ho nkuran? Susuw nhwɛso bi ho. Sɛ wɔfa yɛn adwuma bi mu sɛ yennye ahɔho a wɔba hɔ a, mfomso nnim. Nanso sɛ Kristoni bi nya adwuma a ɛte saa wɔ ayaresabea a ada ne ho adi sɛ wotu nyinsɛn gu nso ɛ? Nokwarem no, n’adwuma no nhwehwɛ sɛ ɔboa ma wotu nyinsɛn gu tee. Nanso so adwuma a ɔyɛ wɔ hɔ no renkyerɛ sɛ ɔreboa ayaresabea a ne dwumadi ara ne sɛ wotu nyinsɛn gu—biribi a Onyankopɔn Asɛm kasa tia no anaa? (Exodus 21:22-24) Sɛ́ nnipa a wɔdɔ Yehowa no, yɛmpɛ sɛ yɛde yɛn ho bɛbata nneyɛe biara a ɛne Kyerɛwnsɛm nhyia ho.
17. (a) Sɛ yɛresi gyinae wɔ adwuma bi ho a, nneɛma bɛn na ɛsɛ sɛ yesusuw ho? (Hwɛ adaka “ So Ɛsɛ Sɛ Meyɛ Adwuma Yi?”) (b) Ɔkwan bɛn so na yɛn ahonim betumi aboa yɛn ama yɛasi gyinae a ɛsɔ Onyankopɔn ani?
17 Sɛ adwuma ho nsɛm sɔre a, yebetumi anya ho mmuae bere a yɛtɔ yɛn bo ase susuw nsɛmmisa a ɛho hia a ɛwɔ nkyekyɛm 15 ne 16 ho no. Bio nso, nneɛma afoforo bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛde ahwɛyiye susuw ho bere a yɛresi gyinae afa adwuma bi ho no. * Ɛnsɛ sɛ yɛhwɛ kwan sɛ akoa nokwafo no bɛyɛ mmara afa tebea biara a ɛbɛsɔre ho. Ɛha na ɛsɛ sɛ yɛde nhumu di dwuma. Sɛnea yehui wɔ Ti 2 no, ehia sɛ yɛtete yɛn ahonim denam Onyankopɔn Asɛm a yebesua na yɛde abɔ yɛn bra da biara da no so. Bere a yɛde yɛn “adwene yɛ adwuma” ma ɛkokwaw no, na yɛretete no, na yɛn ahonim betumi aboa yɛn ama yɛasi gyinae a ɛsɔ Onyankopɔn ani na ama yɛatena ne dɔ mu.—Hebrifo 5:14.
SO ƐSƐ SƐ MEYƐ ADWUMA YI?
Nnyinasosɛm: “Monyɛ ne nyinaa mfa nhyɛ Onyankopɔn anuonyam.”—1 Korintofo 10:31.
So saa adwuma yi bɛma mayɛ nneɛma bi a Onyankopɔn Asɛm kasa tia tee?—Exodus 20:13-15.
Sɛ meyɛ saa adwuma yi a ɛbɛkyerɛ sɛ mereboa adebɔne bi anaa?—Adiyisɛm 18:4.
So ɛyɛ adwuma a wɔyɛ de boa nnipa kɛkɛ a Kyerɛwnsɛm no nkasa ntia?—Asomafo Nnwuma 14:16, 17.
Adwuma no wɔ nkɛntɛnso bɛn; so ɛbɛhaw afoforo ahonim?—Romafo 14:19-22.
Sɛ migyaw m’abusua hɔ kɔyɛ adwuma wɔ ɔman foforo so a, ebenya m’abusua nkate ne wɔn som so nkɛntɛnso bɛn?—Efesofo 5:28–6:4.
SƐNEA YƐBƐKARI PƐ WƆ ADWUMA HO
18. Dɛn nti na ɛnyɛ mmerɛw sɛ yɛbɛkari pɛ wɔ yɛn som mu?
18 Ɛnyɛ mmerɛw sɛ yɛbɛkari pɛ wɔ yɛn som mu wɔ “nna a edi akyiri” “mmere a emu yɛ den” yi mu. (2 Timoteo 3:1) Ɛnyɛ mmerɛw sɛ obi benya adwuma na wakɔ so ayɛ no daa. Sɛ́ nokware Kristofo no, yenim hia a ɛho hia sɛ yɛyɛ adwumaden de hwɛ yɛn mmusua. Nanso sɛ yɛanyɛ ahwɛyiye a, adwumam nhyɛso anaa wiase no honam fam adedodowpɛ su betumi atwitware yɛn som mu. (1 Timoteo 6:9, 10) Momma yɛnhwɛ sɛnea yebetumi akari pɛ na yɛaso “nneɛma a ehia koraa no” mu.—Filipifo 1:10.
19. Dɛn nti na ɛfata sɛ yenya Yehowa mu ahotoso koraa, na dɛn na ahotoso a ɛte saa boa yɛn ma yɛkwati?
19 Fa wo ho nyinaa to Yehowa so. (Kenkan Mmebusɛm 3:5, 6.) So ɛmfata sɛ yɛde yɛn ho to Yehowa so? Asɛm no ne sɛ odwen yɛn ho. (1 Petro 5:7) Onim yɛn ahiade sen sɛnea yenim, na ne nsa nyɛ tiaa. (Dwom 37:25) Enti ɛsɛ sɛ yetie n’Asɛm mu afotusɛm yi: “Mommma sikanibere mmma mo asetena mu, na momma nea mowɔ no ara nnɔɔso mma mo. Na [Onyankopɔn aka] sɛ: ‘Merennyaw wo na merempa wo nso da.’” (Hebrifo 13:5) Anuanom a wɔde wɔn bere nyinaa yɛ ɔsom adwuma no mu pii betumi adi adanse sɛ Onyankopɔn tumi ma yɛn nea yehia wɔ asetenam. Sɛ yɛwɔ Yehowa mu ahotoso koraa sɛ ɔbɛhwɛ yɛn so a, yɛbɛkwati sɛ yɛbɛma yɛn abusua ahiade ahaw yɛn aboro so. (Mateo 6:25-32) Yɛremma honam fam ahiade mma yennyae yɛn som mu dwumadi ahorow te sɛ asɛmpaka adwuma no ne adesuakɔ.—Mateo 24:14; Hebrifo 10:24, 25.
20. Wɔka sɛ yɛmma yɛn aniwa nhwɛ tee a, ɛkyerɛ sɛn, na yɛbɛyɛ dɛn ayɛ saa?
20 Ma w’aniwa nhwɛ tee. (Kenkan Mateo 6:22, 23.) Yɛn aniwa a ɛbɛhwɛ tee no kyerɛ sɛ yɛremma nneɛma pii nkyere yɛn so. Kristoni de n’aniwa si ade titiriw baako so—Onyankopɔn apɛde a ɔbɛyɛ. Sɛ yɛn aniwa hwɛ tee a, yɛremfa yɛn adwene nsi adwuma a ɛbɛma yɛanya sika pii ne akɛsesɛm so. Saa ara nso na yɛremma yɛn kɔn nnɔ sɛ yebenya nneɛma a aba so foforo a wɔbɔ ho dawuru sɛ ɛno na yehia na ama yɛanya anigye no. Wobɛyɛ dɛn atumi ahwɛ tee? Ade baako ne sɛ woremma ɛka a ɛho nhia mmɛyɛ adesoa wɔ wo so. Nhwehwɛ nneɛma ntwa wo ho nhyia mma w’asetena mmɛyɛ kuntann, efisɛ egye bere na wode ahwɛ ne nyinaa so. Tie Bible afotu a ɛse yɛmma yɛn “ano aduan ne nea yɛde kata yɛn ho” nnɔɔso mma yɛn no. (1 Timoteo 6:8) Yɛ wo ho awiɛmfo sɛnea wubetumi biara.
21. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde nneɛma a ɛho hia sisi yɛn ani so, na dɛn na ɛsɛ sɛ edi kan wɔ yɛn asetenam?
21 Fa ɔsom mu hokwan ahorow sisi w’ani so na di akyi. Ɛnyɛ nneɛma nyinaa na yebetumi ayɛ wɔ asetenam, enti ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ani si nea ehia so. Anyɛ saa a, nneɛma a ɛho nhia begye yɛn bere nyinaa na aka nea ɛho hia no mmom ahyɛ. Dɛn ne ade titiriw wɔ yɛn asetenam? Nnipa pii pɛ sɛ wosua ade kɔ akyiri sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya adwuma pa ayɛ wɔ saa wiase yi mu. Nanso Yesu tuu n’akyidifo fo sɛ ‘wɔnkɔ so nhwehwɛ ahenni no kan.’ (Mateo 6:33) Yiw, sɛ́ nokware Kristofo no, yɛde Onyankopɔn Ahenni di kan wɔ yɛn asetenam. Ɛsɛ sɛ yɛn asetena kwan nyinaa—nea yɛpaw, botae a yɛde sisi yɛn ani so, ne nneɛma a yedi akyi—kyerɛ sɛ Onyankopɔn Ahenni no ne n’apɛde ho hia yɛn sen honam fam nneɛma ne wiase no nhomasua anaa biribi foforo.
“GYINAE BI A MISII AMA MANYA ANIGYE NE AKOMATƆYAM”
“Na mebɔ mmɔden wɔ m’adesua mu nti wɔbɔɔ m’abaso sɛ minkosua ade wɔ sukuu bi a agye din wɔ New York kuropɔn mu a merentua hwee. Me papa hyɛɛ me sɛ menhwehwɛ kwan wɔ sukuupɔn ahorow a agye din mu. Emu bi too nsa frɛɛ me, na minyaa hokwan mpo sɛ mɛkɔ akosua ade wɔ sukuupɔn baako a agye din yiye wɔ United States kwa. Nanso nsɛm mmienu bi nti, mepoo saa hokwan no. Nea edi kan no, na mitumi hu sɛ asiane wom sɛ mefi fie akɔtena sukuu mu. Nea ɛto so mmienu, na mepɛ paa sɛ mɛyɛ akwampae adwuma.
“Mayɛ akwampae adwuma no bɛboro mfe 20 ni. Mede me ho ahyɛ ɔsom adwuma afã horow pii mu; masom wɔ mmeae a wohia mmoa, maboa ma wɔasisi Ahenni Asa, na maboa ma wɔahwɛ wɔn a asiane ato wɔn. Seesei mede anigye ne wɔn a wɔka ɔman foforo so kasa reyɛ adwuma wɔ New York kuropɔn mu.
“Sɛ mitwa m’ani hwɛ bere nyinaa som adwuma a mayɛ no a, mihu sɛ manya nhyira pii. Gyinae a misii no ama manya anigye ne akomatɔyam. Meremfa osuahu ne nnamfo a manya no nsesa hwee.”—Zenaida.
ASƐNKA ADWUMA NO A YƐBƐYERE YƐN HO AYƐ
Sɛ yɛma asɛnka adwuma no di kan wɔ yɛn asetenam a, ɛbɛkyerɛ sɛ yɛdɔ Yehowa
22, 23. (a) Dɛn ne nokware Kristofo adwuma titiriw, na yɛbɛyɛ dɛn akyerɛ sɛ saa adwuma yi ho hia yɛn ampa? (Hwɛ adaka “ Gyinae Bi A Misii Ama Manya Anigye Ne Akomatɔyam.”) (b) Dɛn na woasi wo bo sɛ wobɛyɛ wɔ honam fam adwuma ho?
22 Esiane sɛ yenim sɛ yɛwɔ awiei bere mu nti, ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ani si nokware Kristofo adwuma titiriw a ɛne asɛnka ne asuafoyɛ adwuma no so. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Yɛpɛ sɛ yɛde yɛn ho nyinaa hyɛ nkwagye adwuma no mu de suasua Yesu. Yɛbɛyɛ dɛn akyerɛ sɛ saa adwuma yi ho hia yɛn? Onyankopɔn nkurɔfo pii fi wɔn komam nyinaa de wɔn ho ahyɛ asɛnka adwuma no mu sɛ adawurubɔfo wɔ asafo no mu. Ebinom nso ayɛ nhyehyɛe ma wɔsom sɛ akwampaefo anaa asɛmpatrɛwfo. Awofo pii nim sɛ honhom fam nneɛma ho hia, enti wɔahyɛ wɔn mma nkuran ma wɔde wɔn ho ahyɛ bere nyinaa som adwuma no mu. So wɔn a wɔde nsi bɔ Ahenni no ho dawuru no hu adepa bi wɔ wɔn som adwuma mu? Yiw, wohu! Ɔkwan titiriw a yebetumi afa so anya anigye, akomatɔyam, ne nhyira pii wɔ asetenam ne sɛ yebefi yɛn koma nyinaa mu asom Yehowa.—Kenkan Mmebusɛm 10:22.
23 Yɛn mu bebree de bere pii yɛ honam fam adwuma de hwɛ yɛn mmusua. Kae sɛ Yehowa pɛ sɛ yehu adepa wɔ yɛn brɛ mu. Sɛ yɛma yɛn su ne yɛn nneyɛe ne Onyankopɔn adwene ne ne nnyinasosɛm hyia a, yebetumi anya anigye wɔ yɛn adwuma mu. Nanso momma yensi yɛn bo sɛ yɛremma honam fam adwuma biara nyi yɛn adwene mfi Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpaka adwuma no so, efisɛ ɛno ne yɛn adwuma titiriw. Sɛ yɛde adwuma yi di kan wɔ yɛn asetenam a, ɛbɛkyerɛ sɛ yɛdɔ Yehowa, na eyi bɛma yɛakɔ so atena ne dɔ mu.
^ nky. 17 Sɛ wopɛ sɛ wuhu pii fa adwuma ho a, hwɛ Ɔwɛn-Aban, April 15, 1999, kratafa 28-30, ne Ɔwɛn-Aban, January 1, 1983, kratafa 18. (Borɔfo de no yɛ July 15, 1982, kratafa 26.)